Koowheel ခရစ္စမတ် 8600mAh လီမိတက် Edition ကို 2nd Generation အဖွဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းအားစကိတ်စီး Kooboard - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
Koowheel ခရစ္စမတ် 8600mAh လီမိတက် Edition ကို 2nd Generation အဖွဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းအားစကိတ်စီး Kooboard
ဘုတ်အဖွဲ့ကွေးအခါပျက်စီးခံရခြင်းမှဘက်ထရီနှင့်အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ 1. elasticity ဖွဲ့စည်းပုံမှာ; 2. Dual-Brushless Hub-Motors က; ဘေးကင်းလုံခြုံရုတ်တရက်အရှိန်သို့မဟုတ်ရုတ်တရက်ဘရိတ်, ရှောင်ရှားရန် 3. စမတ် chip ကို;
4. အစားထိုးဘက်ထရီဘက်ထရီထုပ်ရှည်သွားပါ, 40km ကြာရှည်နိုင်ပါတယ် 2pcs;
5. ပုံမှန်မြန်နှုန်း 30km / h ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း 45km / h, ပိုမြန်သွားပါ;
ယင်းမော်တာအပူချိန်စောင့်ကြည့် 6. အချိန်နှင့်တပြေးညီထောက်လှမ်းရေးသည့်မော်တာကာကွယ်ပေး;
ဒီတစ်ခါလည်းလျှပ်စစ်စကိတ်စီးနယူး DC ကအားသွင်းကိရိယာ port အတွက်အများဆုံးတည်ငြိမ် mainboard, ရှောင်ရှားရန်လွယ်ကူသော & ဖော်ရွေနယူးစိုင်အခဲ PCB အိုးအိမ် PCB & Motors ကအကြားရလွယ်ကူ link ကို / အနားယူဝါယာကြိုးများဖဲ့
ပါဝါ & connection ကိုသတိပေး Ergonomics ဒီဇိုင်း, Excellent ကပျော့ထိတွေ့နယူး PCB, NO အဆက်ဖြုတ်ပြဿနာချောမွေ့ Acceleration & Brake အလင်းများ & တုန်ခါမှု
97MM Motors က / ဘီးနယူး 350W က x2အစားထိုးမှ PU ဘီးထူးခြားသောပုံစံဒီဇိုင်းနှင့်အတူ Motors က maximumly မက်မြန်နှုန်းမှာ 42 / ဇအအေးမော်တာကူညီပေးပါမည်
နယူးအစီအစဉ်ကိုထုတ်ပြန်ချိတ်ဆက်ဘက်ထရီရှောင်ပါ၏နယူး connectors ရုပ်ပျိုဘရိတ်ခြင်းဖြင့်တရားစွဲဆိုကျော်ကနေဘက်ထရီကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ ထိုအခါ Kooboard ဖြည်းဖြည်းကိုချိုးဖောက်နှင့်ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။
2x အပိုနောက်ဘက်ဘီးကိရိယာအစုံ 1x အပို 4300mah ဘက်ထရီ 1x ul လက်မှတ်က Wall အားသွင်းကိရိယာ 1x, DC ဆိပ်ကမ်းကိုအားသွင်းကိရိယာ adapter 1x သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်စကိတ်စီး T က Tool ကို 1x အဝေးမှ, ကို USB အားသွင်း cable ကို 1x အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ်နှင့်အတူ
ယခင်: အစားထိုးဘီးနှင့်အတူ Koowheel 2nd မျိုးဆက်ကျောင်းသားများလျှပ်စစ်စကိတ်စီး Kooboard
နောက်တစ်ခု: Koowheel Mini ကိုစျေးပေါသေးတာရှည်ခံလျှပ်စစ်စွမ်းအားစကိတ်စီး Kooboard FB1 ပေါ့ပါး
Kooboard အလေးချိန် 7.3 ကီလိုဂရမ် / 16.5 ပေါင်
အရွယ် 90 * 25 * 13cm / 36 * 10 *5လက်မ
အကွာအဝေး 15-20 ကီလိုမီတာ / 9-13 မိုင်
မက်စ် Load 120kg / 264 ပေါင်
ကုန်းပတ် ပစ္စည်း ကနေဒါမေပယ်သစ်သား
ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် 36V 4300mAh / 155WH
ပုံစံ 20pcs18650 မြင့်မားမှုနှုန်းလီသီယမ်ဆဲလ်
အလေးချိန် 1.6 ကီလိုဂရမ် / 3.5 ပေါင်
တာဝန်ခံအချိန် 2-3 နာရီ
ဘက်ထရီသက်တမ်း 1500 သံသရာအားသွင်း
စက် စွမ်းအား Brushless Hub မော်တော် 350W * 2
max speed ကို 42 kph / 26mph
ဘီး ပစ္စည်း PU
ဝေးလံသော connectivity ဘလူးတုသ်အနိမျ့-စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
charger input AC110V-240V 1.5A
လက်မှတ်များ အီး, RoHS, FCC သည် UN38.3
စကိတ်စီး Powered လျှပ်စစ်
Koowheel Mini ကိုစျေးပေါသေးတာရှည်ခံ ele ပေါ့ပါး ...
Koowheel 2nd မျိုးဆက်ကျောင်းသားများလျှပ်စစ်စကိတ်စီး Koo ...